အနော်မာ (taymi): August 2011
ပရိယာယ်ကြွယ်ဝတဲ့ ရှေ့နေလိုပဲ ဖြေရှင်းချက်တွေလည်းနေရာ
Posted by အနော်မာ at 7:18 AM0comments
လူသားအားလုံး ကို သတ္တိရှိတဲ့လူတွေပါလို့ပြောရင် လက်ခံနိုင်ပါ့မလား
မသိဘူး...ဟုတ်ပါတယ် လူတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့အများစွမ်းအားသတ္တိရှိကြ
တွေချည်းပါပဲ...တစ်ချို့က ယောက်ျာားတွေမှာသာ သတ္တိရှိတယ်လို တရားသေသတ်မှတ်ထားကြတာအဲဒါဟာမှားယွင်းတဲ့ အမြင်တွေပါ။
ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါ...မိန်းမတွေမှာ ယောကျားတွေထက် ပိုပြီးသတ္တိရှိတယ်လို့ပြောရတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲတဲ့သတ္တိနဲ့ ခလေး
မွေးရဲတဲ့သတ္တိပါတဲ့...ပုံမှန်ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကို ဆယ်လအတွင်းမှာ တစ်နေ့ကို ငါးကျပ်သားခန့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အသားတွေ တိုးလာပါစေ ..ပြောချင်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာက ကြီးမားလေးလံတဲ့ သန္ဓေသားကို ၀မ်းဗိုက်ပေါ်မှာလွယ်ထားရတဲ့သတ္တိဟာ နည်းတဲ့သတ္တိမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ...
ကမ္ဘာလောကကြီးက သတ္တိရှိသူတွေအတွက် တည်ဆောက်ထားတဲ့အရာပါ ...သတ္တိနည်းသူတွေအတွက် နေရာရဖို့မလွယ်ဘူးလေ.....ကြီးကြီးမားမား
ဖြစ်ချင်ရင် အကြီးကြီးတွေလုပ်ရမှာပဲ ...အဲဒီအခါလိုအပ်တာသတ္တိ.....မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပေါ့.......သတ္တိများ
များရှိတဲ့သူက သူရဲ့ပန်းတိုင်ကို ခိုင်ခိုင်မတ်မတ် တည်တည်ကြည်ကြည်ရောက်အောင်သွားနိုင်ပြီး...သတ္တိနည်းတဲ့သူတွေ
အတွက်ကတော့ လမ်းခုလတ်ကနေ လှည့်ပြန်ရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရလေ့ရှိပါတယ်....သတ္တိဆိုတာကိုဒီနေရာမှာသိသလောက်
ပြောရရင် ကာယသတ္တိနဲ့စိတ္တသတ္တိရယ်လို့ နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲက ကာယ
သတ္တိက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ စိတ္တသတ္တိပါပဲ......
ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့အရာကို ရပါလျှက်မယူပဲစွန့်လွှတ်နိုင်မှု့....မကောင်းမှန်းသိတဲ့အရာကို စွန့်ပယ်ဝံ့မှု့......တရားသဘောအနေနဲ့ပြောရရင် မကောင်းတဲ့ အတွေး၊အကြံစတာတွေကို ဦးနှောက်ထဲအ၀င်မခံပဲ မောင်းထုတ်ရဲ့တဲ့သတ္တိကို စိတ္တသတ္တိလို့ဆိုချင်ပါတယ်.....တစ်ဦးချင်း ၊တစ်မိသားစုချင်း၊တစ်မြို့ တစ်နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေချင်ရင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ဓါတ်စွမ်းအားတွေတိုးတက်နေမှသာဖြစ်နိုင်မည်ဟုတွေးထင်မိပါသည်။
အားလုံးမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သတ္တိရှိသူတွေသာနေရာပေးတက်တဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀တွေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေ
ဇာတ်လိုက်လုပ်တဲ့ လူကိုပဲ လူတွေကဇာတ်လိုက်လို့ ပဲအမြဲမြင်တက်ကြတက်တာ၊ လူကြမ်းလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို လူ
ဆိုးတစ်ယောက်လို့ ထင်မြင်ယူဆတက်ကြတာ၊ ဟုတ်ပါတယ်...ဒါဟာလူတို့ရဲ့သဘာဝပါ...ငယ်ငယ်က အစ်ကိုတစ်
ယောက်နဲ့ စကားအငြင်းအခုန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလေးကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ်
တစ်နေ့ ဘုရားဘ၀ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးစကားစပ်မိတုန်း မှာ ကျွန်
ဖို့ တစ်ယောက်ကတော့ ညစ်ပေပေးရတာ ဓမ္မတာပဲ..ဒီလိုပဲ ဒေ၀ဒတ်ကလည်း ဘုရားရှင်ရဲ့ အရောင်တွေပိုပြီးတောက်ပလာအောင် မိုက်မဲပေးရတာ တကယ်တော့ သနားစရာကောင်းတယ်လို့ပြောမိလိုက်တာကို အစ်ကိုကလက်မခံဘူးဆိုတော့ လူငယ်တွေထုံးစံအတိုင်းငြင်းလိုက်တာ ၅နာရီလောက်ကြာသွားတယ်...ဘယ်သူမှ အဖြေကိုရှာမတွေ့နိုင်ဘူးလို့
သူတို့အရောင်တောက်အောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ သူတွေဟာရှိကြစမြဲပါ
လောကမှာ အဲဒီသီချင်းကိုေ၇းတဲ့သူ၊ သံစဉ်တွေကိုတီးခတ်ပေးတဲ့သူတွေ၊ကိုသိမြင်ခံစားပေးတက်တဲ့ အမြင်မရှိရင်တော့လက်ခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.....ကျွန်တော်အယူအဆ
ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဇာတ်လိုက်တစ်ယောက်လို့ ထင်မှတ်ယူဆပြီး
သူတစ်ပါးကို အရံအနေနဲ့ သတ်မှတ်တက်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပါ.....
လူတစ်ယောက်လို မတွေးပေးနိုင်တာကတော့ အတော်လေးကို နိမ့်ကျ
တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ သင့်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ သင့်ကို ထွန်း
ပပေးတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိန်းသေလက်ခံ ရမှာပဲ
အခြေခံအားဖြင့် သင့်ကိုမွေးလိုက်တဲ့ မိဘ တွေကိုထောက်ပြရမှာပဲ....
ဒီအတွေးလေးကို ရံဖန်ရံခါဖြစ်ဖြစ်တွေးမိရင်တောင် ထောက်လွှားပကြွားတဲ့မာနတွေ
ကိုလျှော့နိုင်မှာသေချာတယ်....ငါရဲ့အောင်မြင်မှု့ ဟာ ငါတစ်ယောက်ထဲရဲ့ အားထုတ်မှုကြောင့် လို့တွေးတောမာန်တက်နေ
တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ကျေးဇူးတရားဆိုတာကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့အသိက ၀င်လာနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး.........
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်အတွက် နောက်ကွယ်မှာ သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံ
နိုင်ကြဖို့ပါပဲ......ကျွန်တော်အတွေးကလည်း ဒေ၀ဒတ်ဟာလည်း သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အစ်ကိုကို ပြောပြချင်သေးတယ်......လူတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ လူယုတ်မာဆိုတဲ့ ဒေ၀ဒတ်ကလည်း နောင်တစ်ချိန်မှာ ဘုရားငယ်တစ်
Posted by အနော်မာ at 3:18 AM0comments
တကယ်တော့ တို့တွေကမျက်နှာများသူတွေလို ၀ံ့ကြွားဖို့မလိုဘူးထင်တယ်းးးးအရိုးရှင်းဆုံးတွေတောင်မှ
ရှုပ်ထွေးနေကြတဲ့ ကာလကြီးမှာ ကမ္ဘာကြီးနေကောင်းနေဖို့ပဲတောင်းဆို
ပန်းတိုင်မရောက်ခင် ငါပိုင်ချင်တာ ငါစိတ်ကိုပါပဲ
ငါစားသုံးခဲ့တဲ့ အဟာရတွေကလည်း မနည်းတော့ဘူး
ဒါတောင်မှ ငါဦးနှောက်တွေ မပြည့်ဝသေးဘူး
ဘေးနားကို မယောင်မလည်ကြည့်မိတော့လည်း အားလုံးက နေသားတကျ
ကာလတစ်ခုလောက် ရပ်ဆိုင်းထားလို့ရရင် ကောင်းမယ်
လူတွေရဲ့နင်းပြားဖြစ်နေပေမယ့် ကမ္ဘာမြေကြီးက ပြုံးနေနိုင်သေးတာ
ဒါဟာ ငါနားလည်ထားတဲ့ တောင့်တမှု့တစ်ခုဖြစ်တယ်
ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ရာသီတွေကို နားမလည်တာတော့ခက်တယ်
ကိုယ်လိုတာကို အတိအကျ နားမလည်တော့ဘူး
မှန်ထဲက ငါဟာ ငါမနိုင်သေးတဲ့ အတ္တတစ်ကောင်ဆိုတာ
Posted by အနော်မာ at 4:39 AM0comments
ထိန်းချုပ်ခံဦးနှောက်နဲ့ တုတ်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေက သမရိုးကျ နေ့တစ်နေ့လိုမျိုး စီးမျောသက်ဝင်နေသလိုခံစားမိပါတယ်
လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်တွေ ၊လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးတွေ၊လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်တွေ ဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတာလဲ.....ဥပမာတစ်ခုပြောရရင် သင်အနေနဲ့
အများယူဆထားတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆတစ်ခု ကို သင်ဝေဖန်မိပြီဆိုပါတော့ သင့်ကို အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ ကြည့်တာကို ပထမဦးဆုံးကြုံရမှာမလွဲပါဘူး....ပြီးတော့ သင်ကို ဘယ်လောက်တော်လို့ တက်လို့လဲဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ပစ်ပေါက်ခံရမယ်
ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံနေကြဓမ္မတာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာမထူးဆန်းပါဘူး....ထူးဆန်းတာက ကျွန်တော်တို့မလွတ်လပ်တဲ့ ဦးနှောက်ကို ပိုင်ဆိုင်နေခြင်းပါ....တစ်ခါတစ်ရံ ဘာကိုမှ ၀င်မဆွေးနွေးခြင်းဟာ မသိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေမှာပါပဲ...အဲဒီလို
အခြေအနေက ပိုကောင်းပါတယ်.....လူတွေအားလုံးမှာ ယုံကြည်ချက်တွေရှိကြပါတယ်.....ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်တွေကို အများကြောင့်စွန့်လွှတ်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိသလို ယုံကြည်ချက်ကို
ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆုပ်ကိုင်ဖက်တွယ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့
အားကျအတုယူဖွယ်ကောင်းပါတယ်....ယုံကြည်ချက် တစ်ခုက ဓလေ့ထုံးစံတွေကို ပယ်နုတ်ရဲတဲ့၊ အစဉ်အလာတွေကို တွန်းလှန်ရဲတဲ့၊
အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ကျွနုပ်တို့ဟာ မှားယွင်းမှုတွေကို
Posted by အနော်မာ at 3:43 AM0comments
လက်ခံသင့်တဲ့အရာကို လက်ခံရမှာပဲ...ဒါဟာငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ အကြောင်းတွေရှိပါတယ်...သင်ကအခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ အမြင်တူအောင်လိုက်ညှိယူလို့မရလို့ စိတ်သောကဖြစ်နေတာလား
လဲဆိုရင်လူအများနဲ့ အမြင်တူဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို သင်
မေ့နေလို့များလား? ဒါမှမဟုတ် သင်ကြိုးစားမှုကြောင့် ဖြစ်လာလိမ့်မည်လိုယူဆထားလို့လား ....တကယ်တော့ဒါဟာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲအရာတွေပါ.....သင့်အယူအဆတွေကို လူတွေလက်ခံ
လာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရာကတော့ကိုယ်ယူဆချက် လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းပါပဲ.....ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စိတ်တိုဒေါသထွက်နေရုံနဲ့တော့ သင်
ဟာသင့်ရဲ့အမြင်တွေကို လူတွေဘယ်တော့မှ လက်ခံလာလိမ့်မှာ မဟုတ်
သင့်လုပ်ရပ်ကို လူတွေက လက်ခံ နိုင်မယ့် အတိုင်းအတာပေါ်မှာလည်း
လိုချင်တာကို မဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ပဲ သူတစ်ပါးကို အပြစ်တင်
နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာရူးသွပ်မှုသပ်သပ်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်
လက်ခံရမယ်လက်ခံပါ.... သင်လိုပဲအခြားသူတွေလည်း လူတိုင်းနဲ့
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ သင်ဟာသင်းကွဲတစ်ယောက်ဖြစ်သွားလိမ့် မယ်လေ....
လူတွေကို လူတွေလို့မြင်တက်ရင် ဒီပြဿနာက အေးဆေးဖြစ်သွားမှာပါ....မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ....အားလုံးအေးဆေးပါ....စိုးရိမ်သင့်တာက သင်ကိုယ်တိုင်ပါ
Posted by အနော်မာ at 3:31 AM0comments
ဟိုဘက်ကို ရွှေ့ ပေးလိုက်ရတာ ဟာ မခံချည့် မခံသာဖြစ်စရာပဲပေါ့..
ဒါပေမယ့် အေးချမ်းပါတယ် ရေရှည်မှာ အပူသက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းဆိုတာ ဘေးကိုဆင်းရပ်ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ..
သို့သော်လည်း ဒါကိုလူတိုင်းတော့လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတိုင်းက ဖြောင့်ဖြူးတဲ့လမ်းပေါ်
ကနေ ဆင်းပေးရမှာ ကို အတွေးထဲမှာတောင် တွေးဖို့ အတွေးတွေဆင်း
ရဲနေလို့ပါပဲ...အနစ်နာခံ ခြင်း သည်းခံခြင်းဆိုတဲ့ သစ်ပင်က စိုက်ပျိုးရတာခက်ခဲသလို အသီးအပွင့်တွေ စားသုံးရမယ့်အချိန်ကိုလည်း
မခန့်မှန်း မတွက်ဆနိုင်လို့ပါ...ဒါကြောင့် စောစောစိုက်ပြီး စောစောရိတ်
သိမ်းရတဲ့ အတ္တသစ်ပင်ကို ပဲ အလုအယက်စုက်ပျိုးနေကြတာပဲဖြစ်ပါ
တယ်...ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဟာ အားလုံးရဲ့အထက်မှာကြည်ညိုခံရ အကိုယ်းကွယ်ခံ
ရတဲ့ လူထူးလူမြတ်တွေအဖြစ် သမိုင်းဝင်ခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်..
သူတို့တွေဟာ အဲဒီလိုနေရာကို ၀င်လုပြီးရခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး...
စွန့်လွှတ်မှုတစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြရတာပါ....သူတို့လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းက ကတ္တီဘာခင်းထားတဲ့
ဒါပေမယ့် အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဟာ သူတို့ရဲ့ အနစ်နာခံ
သည်းခံနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ ဇွဲလုလ္လ စွမ်းပကားတွေကြောင့်ပါပဲ......
ကြီးမားတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်မယ့်သူတစ်ယောက်မှာ အနစ်နာခံစိတ်ဆိုတဲ့ အခြေခံ စိတ်လေးကမရှိမဖြစ်လိုအပ်လှပါတယ်
ပြီးတော့ကိုယ်ကျိ်ုးမဖတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်လည်း လိုအပ်ပါတယ်
ကျွနုပ်တို့ဟာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တော့ မိမိကိုယ်တိုင်က သူရဲကောင်းလို့ထင်မှတ်နေကြတာပါ ...ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ်တိုင်
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းကို လှပ အောင်ရေးကြဖို့ကတော့ ကိုယ့်တာ
Posted by အနော်မာ at 7:11 AM0comments
စကားလုံးတွေက လည်ချောင်းဝမှာ ခြေစုံရပ်တန့်
တစ်ခါတစ်ရံ ပင့်သက်တွေအဖြစ် ထွက်ခွါ
ဘ၀မှော်ရုံတောထဲမှာ ခဏခဏလည်း မောရတယ်
ဦးနှောက်က ကတိုက်ကရိုက် လိုက်ရပြန်တယ်
တစ်နေ့တာ နေ၀င်တာ စောလွန်းတယ်ထင်နေမိတဲ့ အတွေးကို
ဒီတော့ လိုအပ်စွာပဲ ရူးသွပ်လိုက်တယ်
Posted by အနော်မာ at 10:38 AM0comments
ခါသီးမှု့တွေလည်း အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ ပြီ
ရယ်ရွှင် ပျော်ပါးခဲ့ရတဲ့ ကြည်နူးစရာတွေ
ကကွက်စုံ တို့ဘ၀တွေကို ပြန်တွေးတိုင်းဝိုးတ၀ါးဖြစ်နေခဲ့ရပြီ
တို့တွေ ခမ်းနားမှုတွေကို ရလိုဇောတွေနဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့တယ်
အဲဒီကတည်းက ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုတွေကို လောင်းကြေးထပ်ခဲ့ကြတာ
အဝေးကို ရောက်လေလေ လိုချင်တာတွေ ပိုများလေလေ
လိုချင်တာတွေပိုများလာတော့ လည်း တို့တွေ ထပ်ပြီးစွန့်လွှတ်စရာတွေ
အလွမ်းဆိုတာ ရယ်စရာ ပျက်လုံးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး
အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသားဆုံးသူဌေးကြီးတွေကို အင်တာဗျူး
တဲ့အခါ ယခုချိန်မှာ ဘ၀ကို အစကပြန်စ လို့ရရင်ခင်ဗျားတို့ ဘာကို
လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလဲလို့ မေးတော့......သားသမီးတွေနဲ့အတူ နွေးထွေး
ဟုတ်ပါတယ်....သံယောဇဉ်မကုန်သေးတဲ့ ကျွန်ပ်တို့လူသားတွေအတွက် တော့လူ့ဘ၀မှာနေတဲ့အခိုက် အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀
လေးကို မက်မောကြတာချည်းပါပဲလေ....ဘ၀က်ို လှပဖို့တည်ဆောက်ရင်း ဘ၀ ရဲ့သာယာပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးမသွားဖို့တော့ ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့.....လွမ်းလို့အကောင်းဆုံးကတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ပါပဲ....ဒါကြောင့် လွမ်းလို့ကောင်းတဲ့အတိတ်လေးဖြစ်အောင် တက်နိုင်သလောက် ခုလောလောဆယ်ကြိုးစားရမှာပေါ့....
အလွမ်းဆိုတာ လူသားအားလုံးရဲ့မူပိုင် ခံစားမှုဆိုတော့
အားလုံး ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်အတိတ်ကို လှလှပပ လွမ်းနိုင်ကြပါစေ...သောကထွေထွေ နဲ့ မလှပတဲ့ အလွမ်းတွေကိုလည်း ဖြေသိမ့်တွေးတောကာ လွမ်းနိုင်ကြပါစေ....
Posted by အနော်မာ at 4:57 AM0comments
စကားပုံတွေဆိုတာ နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံ တို့ရဲ့ သမီးပျိုလေးများပါ...
အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာကတော့ မိုက်မဲမှုတို့ရဲ့ သခင်မပေါ့....
လောကမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်...
ပုံသေခွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီး တိုင်းတာလို့မရပါဘူး....လောကမှာ သင်ယူ
ဘာဝတရားကြီးပါပဲ...လူတွေဟာနေ့စဉ် မိမိတို့ကြုံတွေ့နေ ကြအဖြစ်အပျက်တွေ ထဲက မှကောင်းတာတွေကို ဘ၀အတွက်သင်ခန်း
စာယူခဲ့ကြသလို မကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှလည်း သင်ခန်းစာယူ
လောကကြီးထဲမှာ တရားသေ အယူအဆတွေ ကိုဆုပ်ကိုင်မထားဖို့တော့
လိုပါတယ်...အားလုံးဟာ ပြောင်းလဲနေလို့ ပြောင်းလဲမှု့နဲ့ လိုက်လျောညီ
ထွေနေတက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်....ငါတကော ကောပြီး ငါလုပ်တာ ငါပြောတာအမှန်ချည်းပဲလို့ ယူဆထားသူအတွက်ကတော့ မှန်ကန်မှု
ကနေ သွေဖည်နေဦးမှာ မလွဲပါဘူး.....သိထားရမှာ ကအားလုံးပြောင်းလဲနေပါတယ်...စက္ကန့် မိနစ် မလပ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်...အဲဒါကိုလက်ခံဖို့လိုပါတယ်
တစ်ခေတ်ကအမှန်တရားတွေဟာ တစ်ခေတ်မှာ လွဲချော်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်....ငါမှန်တယ်
ငါမှန်တယ်လို့ ကြွေးကြော်နေရုံနဲ့တော့ မှန်မှာမဟုတ်သေးဘူး
Posted by အနော်မာ at 2:38 AM0comments
Speech is silver,silence is gold.
ဘာမှမပြောပဲနေပြန်တော့လည်း ငအ လို့ထင်ကြပြန်တယ်
ကိုယ်သိတာလေး မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြောမိတော့ အင်း ဟ၀ှပါးစပ် က
လူတွေက ကိုယ်သိတာလေးကို အားပါးတရပြောချင်ကြတာသိပါတယ်
သူတစ်ပါးကို နားထောင်ပေးဖို့ကြတော့ အင်း....
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ
ဗဟုသုတတွေ ပညာတွေတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ ဘာကြောင့်များ
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပဲ အားလုံးကိုသိနားလည်တယ်လို့ မှတ်ယူနေကြ
" သင်စကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် သူတစ်ပါးပြောတာ
များများနားထောင်ပေးတဲ့ လူကို ဘာကြောင့်စကားပြောကောင်းသူ
လို့သတ်မှတ်ကြသလဲဆိုတာ သိချင်ရင် အရင်ဆုံး များများနားထောင်
လူ့လောကမှာ ပြောချင်တဲ့ ပါးစပ်တွေ အရမ်းများပြီး နားထောင်တက်တဲ့ နားကတော့အရမ်းနည်းနေတာကြောင့်ပါပဲ
ဒီတော့ သင်သိထားတာတွေကို အောင့်အီးပြီး မြိုသိပ်ထားပါ
ပြန်ခြင်း လာ မလာဆိုတာ က အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး
Posted by အနော်မာ at 9:03 AM0comments
သူဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာ မင်းဆုံးဖြတ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ မင်းဘယ်သူကိုမှစိတ်တိုင်းကျမှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတယ်
ရှင်းရှင်းပြောရရင် မင်းဘယ်တော့မှ ဂျိုမကြွနဲ့
Posted by အနော်မာ at 8:29 AM0comments
အဲဒီတုန်းကဗျာ အမေ့ကိုသနားလိုက်တာ ။မှန်တွေကာထားတဲ့လေယဉ်ကွင်းထဲမှာ တစ်ဖက်ရောက်နေတဲ့သားကို
သင်ဖြူးဖျာတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာယက်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်ဒဏ်တွေကြောင့် ရလာတဲ့လေးဘက်နာရောဂါက အမေ့ကိုလူကြားထဲမှာ ကြာကြာမနေနိုင်လောက်အောင်နှိပ်စက်နေလို့
ဝေဒနာကိုအံကျိတ်တင်းခံရင်း သားကိုလိုက်ပို့နှုတ်ဆက်တာ။သားကျောပြင်ကို ငေးကြည့်ရင်းကျန်ခဲ့မယ့်
အမေ့ပုံရိပ်တွေကို မှန်းဆပြီး သနားလိုက်တာအမေရယ်။အားကိုယ်းစရာ
သားကတစ်ယောက်ထဲရယ်။ဒါပေမယ့် အမေနဲ့အဝေးဆုံးမှာပဲရှိနေတယ်။ခုလည်းအဝေးကို ပျံပြေးပြန်ပြီလို့ အမေတွေးနေမှာသေချာပါတယ်လေ။မျက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့ အမေ့မျက်ဝန်းတွေကို သားမကြည့်ရဲဘူးအမေ။သားလုပ်ရက်တွေ မှန်သ
သားသမီးတွေဆိုတာ အရွယ်ရောက်လာရင်အဝေးကို ပျံသန်းထွက်ခွါကြ
မြဲပါအမေ။ဘ၀အတွက်ဆိုတဲ့ လောကဓံ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ အားကုန်နွှဲဖို့
ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့။အမေကတော့ သားသမီးတွေနဲ့ အတူနေခဲ့ကြစဉ်က အိမ်အိုကြီးထဲမှာပဲ အလွမ်းတွေနဲ့ ငိုနေတော့မှာသေ
ချာပါတယ်။ အမေငိုနေမှာသေချာပါတယ်။ မငိုပါနဲ့ အမေရယ်။
Posted by အနော်မာ at 7:50 AM0comments
ကြည်လင်လိုက်၊နောက်ကျိလိုက်နဲ့ ပုံမှန် စီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းလေး အဲဒီချောင်းလေးဘေးမှာ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာ.....မိုးစက်မိုးပေါက်လေးတွေတစ်ဖျောက်
ဖျောက်လေးစကျလာခါစ ဆိုရင် သင်းပျံ့တဲ့မြေသင်းရနံ့လေးတွေကို
ထရံကာအိမ်လေးပါ...သေးငယ်တယ်ထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ နန်းတော်ကြီးလိုပါပဲ...မလုံတဲ့သက်ကယ်ပေါက်တွေက ကျလာတဲ့ မိုးရေ
စက်တွေကို ရှောင်ပြီး တစ်နေရာမှာစုပြုံတိုးဝှေ့ အိပ်ခဲ့ရတာကိုလည်း
ပုံဖော်ရင်း ပျော်နေတက်ခဲ့တာ...အမေတိုင်ပေးတဲ့ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာကို
ရွတ်ပြီးသရဲအကြောက်ဖြေခဲ့ရတာ...အမေချက်ကျွေးတဲ့ ဘယ်လိုဟင်းမျိုးမဆို စားလို့သိပ်ကောင်းခဲ့တာ....အမေချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ငပိချက်ဟင်းလေးရဲ့အရသာကို ပြန်တွေးကြည့်တိုင်း လွမ်းတယ်...
အမေ့ရဲ့လက်ရာ ပဲရေဖွလေး၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းလေး၊ ဆားထောင်းလေး၊ ပြောနေရင်းတောင်သတိရတယ်။
မိုးတွေလာနေပြီအမေ။အိမ်ခေါင်မိုးက အပေါက်တွေ ဖာထေးပြီးပြီးလား။
ခံစားချက်ခြင်းဖလှယ်နိုင်၊ တစ်ယောက်လျှို့ဝှက်ချက်ကို တစ်ယောက်က
ခံရပါမယ်။တကယ်တော့ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို ဖောက်ဖျက်ရိုက်ချိုးနိုင်တဲ့
လူကလည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့လူပါပဲ။ လောကမှာ ဘာမှ ပုံသေတွက်ဆလို့မရပါဘူး ။လူ့စိတ်ဆိုတာလည်းခက်သားပဲလေ။
တကယ်ဆို အားလုံးဟာ ယုံကြည်မှုကိုလဲ လိုချင်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်
ရိုးသားဖို့တော့ အားမထုတ်ချင်ကြဘူးလေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံဘူးတကယ်ပြောတာကိုယ့်ကိုယ်ယုံတဲ့သူကိုပဲ ယုံမယ်။
Posted by အနော်မာ at 6:29 AM0comments
It is said that for money you can have everything,
but you can not. you can buy food,but not appetite;
medicine,but not have: knowledge, but not not wisdom;
glitter,but not beauty; fun,but not joy;
acquaintances,but not friends; servant, but not faithfulness;
leisure, but not peace.you can have the husk of everything
for money,but not the kind.
ငွေပေးလျှင် ဘာမဆိုရသည်ဟု လူတွေပြောကြသည်။မဟုတ်ပါ။
ငွေဖြင့်စားစရာ ၀ယ်ရု ရနိုင်သည်။သို့သော် အရသာကို ၀ယ်ရု မရပါ။
ငွေဖြင့် ဆေးဝါးကိုဝယ်နိင်သည်။ ကျန်းမာခြင်းကိုဝယ်ရု မရပါ။ဗဟုသုတ
အချက်ကို ၀ယ်ရု ရသည်။ညာဏ်အမျှော်အမြင်ကိုဝယ်ရ်ုမရ။အရောင်
လို့ရသည်။မိတ်ဆွေအစစ်အမှန်ကိုဝယ်ရု မရ။အစေအပါးတွေဝယ်လို့ရသည်။သစ္စာရှိမှုကို ၀ယ်ရ်ုမရ။ အားလပ်ချိန်တွေဝယ်လို့ရသည်။ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဝယ်လို့မရ။ငွေဖြင့် သင်သည် အလုံးစုံသော အရာတို့၏ အခွံအကာများကို ၀ယ်ရ်ုရနိုင်သည်။အတွင်းအနှစ်သာရကို ကား မရရှိနိုင်။။။။။။။။။။။။
Posted by အနော်မာ at 5:39 AM0comments
မျက်လုံးနှစ်လုံး စဖွင့်ကတည်းက ဘာတွေ စဉ်းစားမိလဲ
ကျန်ခဲ့တဲ့အတိတ်က ငါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ငါးကြီး
ခုလက်ရှိ ငါးဖမ်းနေတာ ကအနာဂါတ် မျှော်လင့်မှု့
ခုတည့်တည့်မှာ ရပ်နေတုန်း ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ရမယ်မှန်း
လိုချင်တာကို ရယူချင်တဲ့စိတ်က ရလာလေ ပိုလိုချင်ဖြစ်လာတယ်...
Posted by အနော်မာ at 5:11 AM0comments
ငါဘာကောင်လဲ? ငါဘာလဲ? ငါဘာလုပ်မှာလဲ?ငါဘာတွေလုပ်နေလဲ?
လောကမှာ အနိမ့်ဆုံး သူတောင်းစားတွေတောင်မှ မာနဆိုတာရှိတယ်
ပညာတက်တာ နဲ့ မာနကပါလားရရောလား?
အသက်၁၀၀ အတွင်းမှာ စိတ်ကြိုက်ရူးခွင့်လေးတော့ ကန်ထရိုက်
Posted by အနော်မာ at 4:36 AM0comments
တွေက ချစ်စဖွယ်ပါ...အေးစက်ခိုက်တုန်နေတဲ့အခိုက် နွေးထွေးတဲ့
အတွက်တော့ အစားအစာလေးကလည်း ခွန်အားကိုဖြစ်စေပြန်တယ်...
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲ တောင့်တကြတယ်..
ပါတယ်..တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အဆိုးတရားတွေနဲ့ ပက်ပင်းကြုံ တဲ့အခါ
ထိခိုက်ကြေကွဲ စရာ တွေ တွေ့လာရတဲ့ အခါ မှာ လည်း မရှုနိုင်မကယ်နိင်
တော့ နှစ်သက်ဖွယ် ရှိမှာမဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်..ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုရင်
ကျွနုပ်တို့တွေ လောကဓံ ကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးတွေကို
မျှော်လင့်ကြသလို အဆိုးဆုံးတွေအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်
ကျွနုပ်တို့ကြားဖူးနေကြ စာသားလေးပါပဲ..ဒါပေမယ့် တကယ်ကျင့်ကြည့်
I hope for the best but I am prepare for the worst.
Posted by အနော်မာ at 4:03 AM0comments